यौन चाहना पनि राशी अनुसार हुन्छ फरक-फरक, तपाइको कस्तो ? - Internet Khabar
Home Jiwan Mantra यौन चाहना पनि राशी अनुसार हुन्छ फरक-फरक, तपाइको कस्तो ?
हरेक मानिसको स्वभाव र रुची फरक फरक हुन्छ । मानिसले आफ्नो रुची अनुसार व्यवहार पनि भिन्न खालको देखाइरहेको हुन्छ । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई गुराँस । कुनै व्यक्ति गुलियोको पारखी हुन्छन् भने कोही अमिलो वा नुनिलोको । मानिसलाई स्वस्थ रहन यौन जीवनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मानसिक र शारिरीक रुपमा स्वस्थ रहन पनि यौन जीवन आवश्यक हुने मनोपरामर्शदाताहरु बताउँछन् । यसैगरी यौनको मामलामा पनि मानिसहरुमा फरक फरक गुण र व्यवहार हुन्छ । कसैलाई यौन सम्बन्ध राख्दा सादा तरिका मन पर्छ भने कसैलाई विभिन्न तरिका । कुनै जोडीलाई कामुक कुराकानी मन पर्छ भने कसैलाई एक अर्कालाई हेरे मात्र पनि पुग्छ । यौन जीनवमा स्वास्थ्यको महत्व जस्तै ज्योषिशास्त्रका अनुसार पनि यौनिक व्यवहार फरक हुनको कारण राशी हो ।
मीन राशीको सम्बन्ध सुखद र आनन्दायक हुन्छ । यो राशीका व्यक्तिमा भावनाको प्रवलता हुन्छ । पाटनरको भावना बुझेर सन्तुष्टिमा ध्यान दिन्छन् । यिनीहरु पनि यौन चाहना अत्याधि हुन्छ । कुम्भ राशी जस्तै नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न मन पराउँछन् ।
Previous articleप्रधानमन्त्री ओली भन्छन्- कोशीमा पानीजहाज चलाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ
Next articleफ्लोरिडाको सवारी दुर्घटनामा सात जनाको मृत्यु